15ka fasalada dheryasamida ee onlineka ah | Bilaash & La Bixiyay 2022
15ka fasalada dheryasamida ee onlineka ah | Bilaash & Lacag
Waxaa laga yaabaa 21, 2022 Daniel Okeke
Bal qiyaas in aad koob u samaysanayso, shaahaaga/kafeega, ama aad saxaarada u samaysanayso xaaskaaga/saygaaga, qiyaas darxumada ka dhalan doonta wejigaaga marka uu wax ka cuno saxankaas aad isku qurxisay. Taasi waa dhab ahaan waxa fasallada dheriga ee khadka tooska ah ay kaa caawin karaan inaad gaarto, oo uma baahnid inaad ka baxdo gurigaaga bannaankiisa si aad u bilowdo qaabaynta.
Ku habboonaanta fasallada dhoobada internetka waxay kaa dhigi doontaa inaad ka korto inaadan aqoon u lahayn dhoobada oo aad noqoto mid heer caalami ah. Haa, waxaan ula jeedaa kelmad kasta oo aan idhi sababtoo ah waxaan arkay oo maqlay arday ka koray kuwa cusub ilaa dheriyayaal xirfad leh iyagoo raacaya tilmaamaha internetka.
Haddii aad tahay hooyo-guriga-joogta, tani waxay noqon kartaa fursad aad ku samayso wax xiiso leh oo horumarin kara hal-abuurkaaga. Sidoo kale, waxaa jira Shaqooyinka ay hooyada guriga la joogto ay qaadan karto inkasta oo aanay khibrad u lahayn.
Runtii waa wax lala yaabo sida ay dherya-sameeyaha ugu beddelaan dhoobo aan macno lahayn oo dhoobo ah oo cajiib ah. Dheryasameeyaha ahaan, mar kasta oo aad wax hagaajiso waxa aad u sii waalanaysaa farshaxankaaga. Dherigaagu waxa uu maskaxdaada iyo qalbigaaga ku hayaa shaqadaada saacadaha qaar, kamana werweri doontid wax kale, xataa walwalka nolosha.
Waxaad samayn kartaa caagaggaas, oo aad isticmaalayso si aad iskaga qaboojiso jahawareerka adduunka, natiijadu waxay u fiican tahay caafimaadkaaga, waxaadna taas ku samaynaysaa raaxada gurigaaga. Xitaa waxaad qaadan kartaa a shaqo cadaadis yar si aad waqti ugu hesho dhinacyada kale ee muhiimka ah ee nolosha.
Waxa kale oo jira fasallo farshaxan oo kale oo laga yaabo inaad jeceshahay, oo qaybta ugu fiican ee ka mid ah waa dhammaantood bilaash oo waxaad ka baran kartaa raaxada gurigaaga, waad iska qori kartaa fasalo sawir, fasalada naqshadda gudaha, ama a fasalka muusiga.
Kahor intaanan ku tusin liiska fasalada dhoobada ee khadka tooska ah, aan marka hore fahano waxa macnihiisu yahay dheri.
Waa maxay Dherigu
dhoobada dhoobada ah
Ma Baran Karaa Sida Loo Sameeyo Pottery Online?
Faa'iidooyinka Fasalada Dheriga Onlaynka ah
Dabacsan Ka Qaybqaadashada
Gaaritaan caalami ah
Shuruudaha Lagugu Biirayo Casharada Dheriga Onlineka ah
Fasalada Dheriga ee Onlineka ah ee bilaashka ah
1. Dheriga dadka waaweyn - Claire Louise McLauchlan
2. Dheriga dhallinta - Claire Louise McLauchlan
3. Dheriga carruurta
4. Barashada Tuurista Hsin-Chuen Lin
5. Samee bakeeriga dhoobada ah: Dheriga gacanta lagu dhisayo ee bilowga ah
6. 4 Dariiqo Oo La Tijaabiyay Oo Lagu Samayn Karo Dheriga Aan Lahayn Shayga Dheri-sameeyaha
Isku qor fasalka
7. Sida loo tuuro oo loo gooyo saxan ku dul giraangirta dherya-samaynta -Clay iyo Ceramics Class (dhexdhexaad ah)
8. Ku samee koolada dhoobada dhoobada ah oo gacan ku leh giraangiraha dherya-sameeyaha - Bilawga Koorasyada dhoobada / dhoobada (dhexe)
9. Sida Loo Sameeyo Gacan-qabsiga Dheriga (isku-dhafka ah)
10. DIY: Baro sida loo rinjiyeeyo dhoobada leh Motifs Lavender qurux badan
Fasalada Dheriga ee Onlineka ah ee Lacag bixinta
11. Fasalada Online ee Fanaaniinta | Teachinart.com
12. Dheriga lugaha lagu tuuro ee bilawga ah
13. dhoobada guriga ee loogu talagalay bilawga
14. Dugsiga Ceramic
Fasalada dheriga ee khadka tooska ah - FAQs
Dheri-sameeyaha miyuu yahay xirfad wanaagsan?
Sideen ku noqdaa dheryasameeyaha?
Dheriyadu waa habka loo qaado dhoobada oo lagu dhejiyo dhoobada la rabo ka dibna u oggolaanaysa inay qallajiso ka dibna lagu rido dhoobada quruxda badan. Dhoobodu waa nooc ka mid ah walxaha ciidda dabiiciga ah oo uu abuuray dhagaxyada cimilada.
Waxaa jira saddex nooc oo dhoobada ah, waxayna kala yihiin;
Dhoobada dhulku waxay ahayd qaabka ugu horreeya ee dhoobada waxaana loo isticmaali jiray dhismaha lebenka Masaarida, Faaris, Giriiga, Roomaaniyiinta, iyo qaar ka mid ah Shiinaha ilaa qarnigii 17aad. Waa tan ugu fudud uguna dhakhsaha badan in la shido, waxay ku qaadanaysaa 1,000 ° C ilaa 1,150 ° C in lagu shido dheryasameeyaha.
Dheryasameeyaha laga sameeyey sida caadiga ah waa adag yahay, laakiin waa jajaban yahay oo wuxuu leeyahay godad yaryar oo dareeraha iyo hawadu ay ka gudbaan, loomana isticmaali karo in lagu badbaadiyo biyaha.
Qalabka dhagaxa ah ayaa si tartiib tartiib ah u horumaray 5 kun sano ka hor (5,000 sano ka hor), waxaana la shiday wax yar ka sarreeya dhoobada Earthenware. Heerkulka sare wuxuu ku dhow yahay 1,200 ° C waxayna ka dhigaysaa dhoobada inay awood u yeelato inay sii dheeraato, waxayna ceshan kartaa biyaha.
Porcelain Clay hadda waa dhoobada ugu fiican ee loo isticmaalo in wax lagu shubo, waxayna ka timid Shiinaha, ilaa 1600 BC. Waxa lagu shidi karaa ku dhawaad ​​1,200°C ilaa 1,450°C taas oo ka dhigaysa badeecada ugu dambaysa in ay noqoto mid aad u adag oo dhalaalaya.
Porcelain Clay waa waxa inta badan fasaladan dheriga online-ka ah ay u isticmaali doonaan inay ku muxaadareeyaan. Waxa kale oo aad ka heli doontaa fasallo ku saabsan dhoobada Earthware iyo dhoobada Stoneware.
Barashada sida loo farsameeyo dheriga ama dhoobada quruxda badan ayaa laga yaabaa inay ka sahlanaato sidaad u malaynayso fasalada dheriga ee internetka. Sababtoo ah fasaladu waxay u shaqeeyaan si waafaqsan xawaarahaaga, waxaad dooran kartaa inaad hakiso oo dib u daawato qayb mar kasta oo aad rabto.
Intaa waxaa dheer, waxay ku yimaadaan fiidiyow HD ah, kaas oo awood kuu siin doona inaad si sax ah u aragto waxa macallimiintaadu sameynayaan.
Waxaa jira faa'iidooyin badan oo laga helo fasallada dheriga ee internetka, waa kuwan qaar ka mid ah.
Waxaad dooran kartaa inaad wax ku barato wakhtigaaga, uma baahnid inaad tagto dhismo jireed oo qasab ah ama aad sugto macalin inuu wax ku baro sida ku cad jadwalkooda (taas oo aan haba yaraatee xumaan). Waxaad ka qayb gali kartaa mid kasta oo ka mid ah fasalada dheriga internetka wakhti kasta oo aad rabto (kaliya iska hubi inaad naftaada u edbiso si aad diin ahaan ula socoto qaybaha).
Waxaad ku dhex mari kartaa agabka koorsada, oo xitaa waxaad samayn kartaa hawshaada rabitaankaaga, waxaadna fursad u leedahay inaad la sheekaysato ardayda kale ee ajnabiga ah.
Waxaad dooran kartaa inaad saaxiibadaa keento gurigaaga, dhammaantiin waxaad ka qaybqaadan kartaan fasallada dheriga online-ka ah, waxaad dooran kartaa inaad ku dhex sameysataan jikada, adigoo xiran dharka jiifka. Waxaad dooran kartaa inaad isla markiiba timaaddo fasalka ka dib markaad toosto ama ka dib bilawga, ama xitaa ka hor intaadan seexan.
Si kastaba ha ahaatee, iska hubi inaad haysato wakhti go'an oo aad mar walba ku timaado fasalka sababtoo ah dabacsanaantu waxay sidoo kale la timaadaa dhibkeeda, taas oo ay ku jirto iswaafaq la'aan iyo joojinta mar uun.
Casharradan dheriga online-ka ah waxay ka dhigan yihiin inaad joogi karto waddan kasta oo aad weli ka qaybqaadan karto koorsada waddan kale.
Waxaa jira dhawr waxyaalood oo aad u baahan doonto si aad uga qaybgasho fasallada dheriga ee khadka tooska ah, waxaa ka mid ah;
Laptop ama smartphone wanaagsan
Potter's wheel (haddii aad ku talo jirto inaad ka qayb qaadato giraangirta dheryasameeyaha, laakiin ma aha qasab).
Qayb yar oo maqaar chamois ah.
feeraha alwaax ee samaynta taarikada
Hadda aan aragno qaar ka mid ah fasallada dhoobada online-ka ah, waxaan marka hore liis gareyn doonaa fasallada bilaashka ah, ka dibna liis gareyn doona fasallada lacag bixinta.
Tani waa mid ka mid ah fasalada dheriga internetka ugu fiican ee loogu talagalay dadka waaweyn, waa fasalka YouTube halkaas oo macalinkaaga, Claire Louise uu ku tusi doono sida loo sameeyo wax ku ool ah iyo diyaar u ah in la isticmaalo dhoobada Waxaad dooran kartaa inaad ku isticmaasho gurigaaga, beertaada xafiiska ama xitaa iibiso.
Uma baahnid qalab badan fasalkan, waxaadna isticmaali doontaa gacantaada si aad dhoobadaada ugu dhejiso farshaxan wanaagsan, taas oo macnaheedu yahay, ma isticmaali doontid taayir aad ku dhejisid fasalkan. Waxaad baran doontaa sida loo habeeyo looxa farmaajo, saxanka subagga, iyo tagine-qaabka Morocco ee wax lagu kariyo. Waxaa intaa dheer, Claire waxay si dhab ah ku bari doontaa sida loo sameeyo sanduuqyada dahabka, dhalooyinka qurxinta, iyo qubeyska shimbiraha ee gidaarka ah ee beertaada.
Fiidiyowgu wuxuu ku bilaabmayaa isagoo ku tusaya sida loo habeeyo waxyaabaha fudud sida looxa wax lagu jarjaro, saxan farmaajo, iyo saxan subag ah.
Waxayna ku socotaa inay kuu sheegto qaar ka mid ah qalabka aad ugu baahan doonto fasalka. sida Mat (qalabka nooca shiraac ah ayaa ka fiican) ama loox weyn oo alwaax ah, biin duuban, iyo maro (aan loo baahnayn). Waxa kale oo ay ku tusisay warqad ay ku nashqadaysay looxa wax lagu gooyo ee ay damacday in ay wax ka samayso.
Isku qor Fasalka!
Sidaad qiyaastay, kani waa fasalka dheriga ee isla macalinkii sida gaarka ah loogu diyaariyey dhalinyarada. Waa mid ka mid ah fasalada dheriga online-ka ah ee ugu wanaagsan ee aad ka heli karto YouTube ee loogu talagalay dhalinyarada sababtoo ah waxay u qaybsan tahay fasallo toddobaadle ah oo leh in ka badan 15-daqiiqo fiidiyowyo fasal kasta.
Fasalka waxa uu ku bilaabmaya in uu ku baro sida loo sameeyo guri cirfiid ah oo leh dheriyo qanjaruufo ah, waxa kale oo aad isticmaali doontaa farsamada gacanta ee fasalkan. Waxay ku bilaabi doontaa inay ku tusto inaad dhoobadaada u qaabayso sida kubbadda barafka oo kale adoo salaaxaya runtii.
Tani waa fasal kale oo YouTube ah, laakiin muuqaalkan waxaa loogu talagalay carruurta. Waa mid ka mid ah fasallada dheriga ee khadka tooska ah ee dhererkiisu yahay 49 daqiiqo.
Macallinku wuxuu baran doonaa carruurtaada sida loo sameeyo buul shimbireedka oo leh bur, milix, biyo diirran, saliid khudradeed, biin duuban, baaquli yar iyo mid dhexdhexaad ah, wargeys, mindi aan af lahayn, saxaarad dubista, qalin, iyo taliye. Macallinku aad buu u xiiseeyaa in la dhegeysto, waxaana aaminsanahay in carruurtaadu ay jeclaan doonaan inay wax ka bartaan iyada.
Tani waa mid cajiib ah tallaabo-tallaabo, in ka badan 100 qaabaynta fasalka YouTube, taasi waxay ku bari kartaa wax badan oo ku saabsan samaynta, laakiin qasab maaha kuwa bilawga ah. Macallinkaagu, Hsin-Chuen, wuxuu isticmaali doonaa dhererka dheryasameeyaha inta lagu jiro xiisadaha, wuxuuna ku bilaabi doonaa "Ku tuurista bocorka dhoobada giraangiraha dheriga."
Dhinaca wanaagsan ee ka mid ah waa, in ay jiraan fasallo badan oo kaa caawin kara inaad noqoto dherya-sameeye xirfad leh. Dhinaca xun ee fasalkan waa deegaanka oo buuq badan iyo fiidiyowyadu waa kala firirsan yihiin, markaa waa inaad hoos u rogtaa si aad u hesho qaybta koowaad ee fiidiyowga.
Tani waa mid ka mid ah fasalada dheryaha ee lacag la'aanta ah ee laga sameeyay SkillShare. Macallinkaaga, Mia Moss, oo qabanaysay dhoobada 10 sano oo uu ka furay istuudiyaha Berlin ayaa ku tusi doona sida dhoobada loo sameeyo koob weyn.
Waxay isticmaali doontaa gariiradda-dhisidda habka laguu baro fasalkan, aad bayna u fududahay in la fahmo sababtoo ah waxaad isticmaali doontaa gacmahaaga iyo qalabyada guriga. Fasalka gabi ahaanba waa kuwa bilowga ah, uma baahnid wax khibrad ah si aad ugu biirto.
Tan ugu muhiimsan, 74% ardayda ayaa u codeeyay koorsada dhaaftay filashooyinkoodii. Markaa haddii aad tahay bilow, markaa tani waxay noqon kartaa koorsada aad u baahan tahay si aad u bilowdo safarkaaga dheriga.
Fasalkan, macalinkaaga, Manda Marathe, farshaxan-yaqaan wanaagsan, iyo farshaxan-yaqaan, ayaa ku hogaamin doona 4 farsamooyin oo gacmahaaga ah, waxaadna isticmaali doontaa farsamooyinkan si aad u abuurto dhoobo qurux badan. Tani waa mid ka mid ah fasalada dhoobada online-ka ah halkaas oo aad u baahan doonto qalabka ugu fudud ee qalabka dhoobada, markaa looma baahna inaad iibsato qalab qaali ah fasalkan.
Fiidyowyada waxaa lagu sameeyay HD si aad u arki karto sida saxda ah waxa macalinkaagu sameynayo. Waana kuwa bilowga ah.
21-daqiiqo koorsadan dhexdhexaadka ah ee gaaban, waxaad baran doontaa sida loo dhex dhigo saxankaaga, ka jar saxankaaga shaagagga, iyo sida loo gooyo saxankaaga si aad uga dhigto mid xirfad leh.
Tani waa koorso kale oo 26-daqiiqo ah oo Intermediate ah oo ku bari doonta sida loo sameeyo koob, koorsaduna waxay u qaybsantaa 3 qaybood. Waxa uu ku bari doonaa sida loo sameeyo jidhka mugga qaybta koowaad, ka dibna qaybta labaad, wuxuu ku bari doonaa inaad samayso gacanta. Kadib qaybta ugu dambeysa, waxaad baran doontaa inaad ku xirto gacanta iyo jirka oo aad sameyso shaqadaada ugu dambeysa.
Ogaanshaha inta dhoobada ah ee aad u baahan tahay markaad samaynayso gacantaada waa mid aad muhiim u ah, taasina waa waxa fasalkani ku bilaaban doono.
Tani waa mid ka mid ah fasalada dheriga internetka ee ku tusi doona sida loo ogaado booska gacanta ee saxda ah ee duubista gacanta duuban. Sida aad u soo jiidi karto gacanta duuban iyo waxa dusha sare ee shaqada ayaa si fiican ugu shaqayn doona istaraatiijiyadan.
Tani waa mid ka mid ah fasalada dheriga internetka ee loogu talagalay qof walba sababtoo ah waxaad had iyo jeer u baahan tahay nashqadaas quruxda badan ee koobkaaga, ama weelka mar kasta oo aad dhammayso naqshadaynta. Macallinkaagu wuxuu ku tusi doonaa sida loo rinjiyeeyo lavender ee ceramics, iyo sidoo kale qurxin alaabta dhoobada ah ee kala duwan.
Macallinkaagu waxa uu ku bilaabi doonaa rinjiyeynta koobabka shaaha/kafeega, ka dibna waxa uu u gudbi doonaa rinjiyeynta saxannada iyo maddiibadihii, ka dibna ugu dambayntii waxa ay ku dhamayn doontaa talooyinka qaar oo lagu daro qaabab iyo midabyo kale.
Tani waa mid ka mid ah fasalada dheriga ee internetka ee lacagta lagu bixiyo oo ay dhigtaan kumanaan arday oo ka kala yimid 42 wadan. Aqoon-is-weydaarsiyadoodu had iyo jeer waxay kugu dhiirigeliyaan inaad waydiiso su'aalo ilaa aad ka fahanto jawaabta, muuqaalkooduna had iyo jeer waa diyaar si aad dib ugu booqato mar kasta oo aad dareento.
Antoinette Badenhorst, aasaasaha teachinginart.com waxay wax ku qurxinaysay dhoobo dhoobo ah in ka badan 40 sano, mid ka mid ah aqoon-isweydaarsiyada, waxay ku bari doontaa sida loo barto dhoobada dhoobada ah. Waa 6 usbuuc oo e-koorso ah oo ay gacanta ku qaban doonto oo ku bari doonta hal talaabo ka dib.
Waxaad isticmaali doontaa farsamada gacanta lagu dhiso iyo giraangiraha dherya-sameeyaha labadaba, waxayna soo dhawaynaysaa dherya-sameeyaha heer kasta, haddii aad tahay bilow ama hadda aad tahay dheryasameeyaha xirfadda leh.
Intaa waxaa dheer, waxaa jira aqoon-is-weydaarsiyo kale oo aad dooran karto inaad iska diiwaan geliso sida;
dhoobo midab leh
Dheriga gacan-ku-dhiska ee bilowga ah
Maqaarka shaaha ee bilowga ah
Alaabada cashada ee gacan-ku-dhisidda
Talooyin weelka dhoobada ah ee giraangiraha
Qaado tuurista wheel heerka xiga
Qaabka Teapot-ka ee wajiga leh
Goosha shaaha ee giraangiraha lagu tuuro
Dhaldhalaalka waa la fududeeyay
Toogasho beddel ah
La glazing la Ron Roy
Tani waa mid ka mid ah fasalada dheriga internetka ee ugu wanaagsan ee lagu daabacay Udemy. Dhab ahaantii, waa a iibshaha ugu fiican koorsada, oo leh 4.9 xiddigood oo ay qiimeeyeen 131 arday.
Waxa jira in ka badan 80 fiidiyow oo tallaabo-tallaabo ah oo kugu hagi doona samaynta dhoobada dhoobada adigoo isticmaalaya giraangiraha dherya-sameeyaha. Fasalka wuxuu ka bilaabmaa inuu ku baro guryaha dhoobada ah iyo qalabka giraangiraha dhoobada, ka dibna wuxuu u gudbaa inuu tuuro aasaaska, koobabka, maddiibado, foomamka furan, iwm.
Marka uu fasalku socdo, waxaa lagu siin doonaa hawlo, dhammaadka koorsada, waxaa lagu siin doonaa shahaado dhammaystiran.
Tani waa mid ka mid ah fasalada dheriga ee internetka kaas oo ah a iibshaha ugu fiican oo leh 98% dib u eegis togan oo ka badan 1.4k arday oo la daabacay DOMÊSTIKA. Macallinkaaga, Paula Casella waa ka qalin jebisay fanka wanaagsan waxayna aasaastay Bambucito Cerámica Orgánica.
Waxay ku jirtay ganacsiga dhoobada in ka badan 15 sano, waayo-aragnimadeeda ballaaran, waxay ku qaadan doontaa koorsadan 3h 51m. Waxa jira 21 cashar oo in ka badan 54k arday ayaa mar hore is-diiwaangeliyey.
Koorsadan bilawga ah waxay ku bari doontaa sida loo qaabeeyo oo loo qurxiyo dhoobada laga soo bilaabo eber isla markiiba gurigaaga. Waxaad baran doontaa faraqa u dhexeeya dhoobada foornada lagu dubay iyo dhoobada hawada la qalajiyey, waxaad sidoo kale baran doontaa caaryada malaasta oo aad mar kale isticmaali karto si aad u abuurto qaybo badan oo mashaariic mustaqbalka ah.
Tan ugu muhiimsan, marka aad dhammeysato koorsada, waxaa lagu siin doonaa shahaadada dhammaystirka.
Tani waa mid ka mid ah fasalada dheriga internetka oo leh 140 aqoon-is-weydaarsi, waxaad dooran kartaa inaad doorato aqoon-is-weydaarsi alifbeeto ah, cusub oo lagu daray, ama qayb ahaan. Sidoo kale, waxaad dooran kartaa inaad ku biirto mid ama in ka badan oo 15 ka mid ah kooxaha dhoobada ee bilaashka ah, halkaas oo aad ka heli karto cusbooneysiinta, la xiriirto dadka, wax ka barato, oo aad la wadaagto aqoontaada.
ClayShare waa mid ka mid ah fasalada dheriga ee khadka tooska ah ee bixiya 7 maalmood oo tijaabo ah oo bilaash ah, iyo markaad iska diiwaan geliso fasaladooda $22.99 bishii, waxaad heli doontaa boqollaal fasal dheri dherer buuxa ah iyo fiidiyowyo farshaxan oo kale. Waxa kale oo aad heli doontaa baahinta tooska ah toddobaadlaha ah ee dhammaan apps-kooda, Facebook iyo YouTube iyo soo jeedinno kale oo badan marka aad is-diiwaangeliso.
Si kastaba ha ahaatee, waxaad dooran kartaa inaad iibsato fiidiyowyadooda si gaar ah.
Waa xirfad wanaagsan sababtoo ah dheryasameeyaha celcelis ahaan wuxuu heli karaa $20 saacaddii
Waxaan ku siinnay 15 fasal oo aad ka qaybgeli karto oo aad ku noqon karto dheri-sameeyaha muddo gaaban gudaheed.
Koorsooyinka Rinjiyeynta Intarneedka ee Bilaashka ah ee ugu Fiican
Koorasyada Microsoft ee Onlineka ah ee ugu Wanaagsan oo leh Shahaadooyin
Sameeyaha Su'aalo-ururinta ee khadka tooska ah ee bilaashka ah
Koorsada Robotics-ka ee Bilaashka ah ee Bilowga ah
Koorsooyinka Tababarka Xannaanada Ilmaha ee Tooska ah ee Bilaash ah oo wata Shahaadooyin
Ciyaaraha Madadaalada ee ugu sarreeya ee Lamaanayaasha
Creator Content at Study Abroad Nations | Fiiri Maqaaladeyda Kale
Daniel waa abuure ka kooban wax ka badan 2 sano oo waayo-aragnimo ah cilmi-baarista iyo abuurista nuxur si uu u caawiyo ardayda raba inay wax ku bartaan dibadda iyo kuwa raadinaya inay qaataan koorsada internetka ee horumarinta shakhsi ahaaneed, helitaanka xirfad ama shahaado. Dan waxa uu ku biiray SAN 2021 sida cilmi-baadhis ku salaysan abuuraha.
Wuxuu jecel yahay la kulanka dad cusub iyo horumarinta xiriir cusub.
Sida Loo Helo Shahaadada Sayniska Forensic
Sida loo helo deeqda waxbarasho ee Harvard MBA
23 Deeq waxbarasho oo MBA Dibadda ah
15ka deeqaha waxbarasho ee ugu sarreeya Mareykanka ee MBA
Koorsooyinka Free Online Baro Xirfad Online koorsooyinka interneedka wax ku barta internetka
Previous Post:17 Deeqaha waxbarasho ee Maraykanka ee Ardayda Afrikaanka ah
Post Next:10 Kulliyadaha Bulshada ee Florida